‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउन षड्यन्त्र गर्नेहरुलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ कालोमोसो दल्ने चेतावनी’ « रिपोर्टर्स नेपाल
‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउन षड्यन्त्र गर्नेहरुलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ कालोमोसो दल्ने चेतावनी’
इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरू र बार पदाधिकारीसँग खनिईन् तारा बराल
काठमाडौं, २१ कार्तिक । जनताको आयोग महा–अभियानले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको भन्दै त्यो षड्यन्त्रलाई कुनैपनि हालतमा सफल हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महाभियानले यस्तो बताएको हो ।
महाअभियान कार्यसमितिकी अध्यक्ष तारा बरालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन सम्भव नदेखेपछि अहिले दबाब सिर्जना गरेर राजीनामा गर्न लगाएर हटाउने षड्यन्त्र भएको बताईन् । नेपाल बारको आन्दोलन पनि विदेशीको खर्चमा भएको उनको आरोप छ ।
उनले इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरुले सुरुमा लैनचोर आसपासमा गोप्य बैठक गरेको र पछि हल्लाखल्ला हुने भयो भनेर अनामनगरको घट्टेकुलो आसपासमा गरेको कुरा आफूकहाँ मौखिक रुपमा सूचना आएको पनि सार्वजनिक गरिन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध देशभरि रहेका ९० वटा बार ईकाईले आन्दोलन गर्ने भनिएको सुनाउँदै ती बार ईकाईको खर्च विदेशीले व्यहोर्ने कुरा भएको पनि आफूहरुले थाहा पाएको बरालले आरोप लगाईन् ।
अब आम जनता सडकमा आउनुपर्ने उनको अपिल थियो । उनले भनिन्,‘वकिलहरुलाई संघ÷संगठन बनाउन कसले लगायो ? त्यो गलत होईन र ? जनताको आयोग महाभियान सत्य र निष्ठाको पक्षमा छ । हामी देशको हितको पक्षमा सधैं उभिन्छौं । प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय चाहिए हामी उहाँको पक्षमा उभिन तयार छौं ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाएर अब न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारी भएको र त्यसलगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्का अब प्रधानन्यायाधी हुने बताईन् । उनले भनिन्–‘उनीहरुले आधा–आधा कार्यकाल खाने सहमति छ । मीरा खड्का दुई वटा नागरिकता छ भन्ने कुरा आएको छ । शम्भु थापा तिमी को हौ ? प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने ? सपना प्रधान मल्ल पार्टीकी मान्छे हो । सपना प्रधान प्रधानन्यायाधीश हुनु भनेको एमालेले मात्रै न्याय पाउनु हो । बारका अध्यष चण्डेश्वरले हामीलाई चोलेन्द्रको चम्चे भनेछन्, बारले आन्दोलन फिर्ता नलिए हामी अर्को आन्दोलन गर्छौं ।’
उनले अब न्यायालय अवरुद्ध गर्ने र जनतालाई न्याय पाउनबाट बञ्चित गर्नेहरुलाई जहाँ भेट्यो त्यही कालो मोसो दल्ने पनि चेतावनी दिईन् । त्यतिमात्रै नभएर जे भेट्यो त्यसले हान्ने पनि उनको चेतावनी छ । उनले भने,‘त्यसरी हान्ने जनतालाई हामीले पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं । अब देशलाई खिचातानीमा राख्नुहुन्न । नेपाल बारको आन्दोलनको तुक छैन् ।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा महाअभियान कार्यसमिति सदस्य मनिष मानवले सम्पुर्ण नेपाली जनताहरु जाग्नुपर्ने दिन आएको बताए उनले न्यायालय सेतोलाई सेता र कालोलाई कालो भन्ने र छुट्याउने स्थान भएको भन्दै अहिले पैसामा बिकेको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘नेपाल बार प्रधानन्यायाधिश लाई नियुक्ति गर्ने र हटाउन बनेको हो । राजनीतिक दलहरुले चोलेन्द्र शमशेरलाई बलिको बोको बनाएका छन् ।’
उनले नेपाल बार नै खारेज गर्न पनि माग गरे । उनले भने,‘न्यायापालिकालाई हस्तक्षेप गर्ने यो बार खारेज गर्नुपर्छ । शम्भु थापा कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भनेर फैसला गर्ने वकिल हुन् ।’ उनले नेपाल बार एशोसिएशन जसरी पनि खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे ।
महाभियानका संरक्षक वीरेन्द्र डंगोलले न्यायालयमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको टिप्पणी गरे । उनल न्याय दिनेहरुनै यसरी लडेपछि जनताहरु झन अन्यायमा परेको गुनासो गरे । उनले नेपालको न्यायिक ईतिहासमा अरु कोही पनि प्रधानन्यायाधीशहरुले नगरेको काम चोलेन्द्रले गरेको समेत जिकिर गरे । उनले भने,‘अब फेरी अर्को प्रधानन्यायाधीश कस्तो आउने हो ? झन् फटहा पो आउने हो की के थाहा ?’ उनले शम्भु थापाले प्रति मुद्दा २ लाखमा हेर्ने गरेको समेत आरोप लगाए । जनताको हितको लागि आफुहरुले अभियान चलाएको भन्दै उनले राजनीतिक दलको झोला बोक्न छाडेर सबै एक भएर अगाडि बढ्न समेत आग्रह गरे ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा पीडित लक्की कुमार रौनियारले आफ्नो दुःखेसो पोखेका थिए । न्यायाधीशहरुले कसरी आफूलाई मुद्दा हराए भन्दै सुनाएका थिए । उनले अंशबण्डा मुद्दामा आफूलाई तत्कालिन सुशिला कार्कीलगायतका न्यायाधीशहरुले अनावश्यक दबाब दिएको बताए । उनले न्यायाधीशहरु शुसिला कार्की र प्रकाशको संयुक्त इजलासले अंशवण्डा फैसला गर्दा आफु झन् पीडित भएको गुनासो गरे ।
उनले भने,‘दीपककुमार कार्की पनि प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा हुनुहुन्छ, जोसुकै होस् तर राम्रो फैसला गर्नुपर्छ ।’ उनले सही फैसला नगर्ने न्यायाधीशहरुलाई राख्न नहुने जिकिर गरे । हरेक मानिस कुनै न कुनै कुनै दलसँग आबद्ध भएको भन्दै न्यायाधीशले सेतोलाई सेतो र कालोलाई कालो भन्नुपर्ने उनले बताए । न्यायाधीशहरुले कार्यसम्पादत गर्दा निश्पक्ष भएर गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘उहाँहरु निश्पक्ष भएर न्याय सम्पादनको काम गर्नुपर्छ, गल्ती कसको छ छुट्याउन सक्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नोजस्तो मुद्दामा अरुलाई अल्झाएर थप दुःख नदिन समेत न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरे । उनले चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाले मात्रै न्यायालयको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा अर्का वक्ता मदननाथ कर्माचार्यले न्यायिक क्षेत्र निश्पक्ष हुनुपर्ने बताए । उनले न्यायालयमा दुई वा सोभन्दा बढीको नेतृत्वमा रहन नहुने बताए । न्यायको व्यवस्थामा राज्यसंस्था चलाउनेहरु स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले बार एसोशियसनभित्र राजनीतिको छायाँ पार्नु नहुने पनि टिप्पणी गरे । उनले राजनीति गर्ने हो भने न्याय छाड्नुपर्नेमा जोड दिए ।